Farmaajo oo ku baaqay in doorashada Jubbaland lagu qabto Magaalada Garbahaarey - Muqdisho Online
Home Wararka Farmaajo oo ku baaqay in doorashada Jubbaland lagu qabto Magaalada Garbahaarey
Farmaajo oo ku baaqay in doorashada Jubbaland lagu qabto Magaalada Garbahaarey
Warsaxafadeed ay maanta soo saareeyn kooxda laga magac baxday kooxda isbadal doonka Jubbaland ayaa lagu sheegay in doorashada Jubbaland ee dhawaan la qaban doono lagu qabto magaalada Garbahaareey ee Gobolka Gedo.
Qoraalkaan oo ay ku saxiixan yihiin kooxda ay taageerto dowlada Federaalka ayaa waxaa ay ka codsadeen beesha caalamka in ay dowlada fedaraalka ay door ku yeelato doorashada ka dhici doonto Jubbaland.
Hadalka ka soo yeeray kooxda isbadal doonka Jubbaland ayaa waxaa looga soo dhiibay Villa Soomaaliya. Ilo xog ogaal ah ayaa u sheegay MOL in madaxweyne Farmaajo uu ku dhiirigaliyay musharaxiinta ay taageerto dowlada fedaraalka in ay ka codsadaan beesha caalamka in doorashada Jubbaland lagu qabto magaalada Garbahaareey madaama ay ku sheegeen deegaankaas in uu yahay mid ka madax banaan hogaanka Axmad Madoobe.
Halkaan ka aqrsio qoraalka:
Previous articleXildhibaan Cadoow Cali Gees oo iibsaday Xisbigii GORSOOR (Imisa ayuu kala baxay yaasa xulufo kula ah )
Next articleDowlada Maraykanka oo sheegatay in ay dishay xubno ka tirsan Al Shabaab